Maraakiib laga leeyahay dalka Iiraan ayaa ka xaday kalluunka xeebaha Soomaaliya | Somalisan.com
Home Afsomali Maraakiib laga leeyahay dalka Iiraan ayaa ka xaday kalluunka xeebaha Soomaaliya
Maraakiib laga leeyahay dalka Iiraan ayaa ka xaday kalluunka xeebaha Soomaaliya
Dooni weyn oo maraakiibta kalluumeysiga Iiraan ayaa la aqoonsan yahay inay si sharci darro ah uga shaqeynayaan biyaha Soomaaliya muddo sannad ka badan, taasoo waxyeeleysay kaydka kalluunka ee waddan halkaas oo saddexdii qofba mid ka mid ahi ay la soo daristo cunno yaraan.
Dowladda Soomaaliya, oo aan awoodin inay bileysato xeebta ballaaran ee ay leedahay, ayaa walaac ka muujisay cuntada iyo amniga badaha waxayna ugu baaqday Iran inay baarto.
Falanqaynta ay sameysay Kalluumeysiga Caalamiga ah ee Kalluumeysiga, waa hay’ad samafal oo maareysa maraakiibta, iyo Trygg Mat Tracking, oo ah hay’ad aan dawli ahayn oo siisa sirdoonka kalluumeysiga iyo falanqeynta dalalka xeebaha Afrika si ay gacan uga geysato la-dagaallanka sharci-darrada, kalluumeysiga aan la soo sheegin (IUU) kalluumeysiga, waxay soo jeedineysaa inay noqon karto tan ugu weyn hawlgallo kalluumaysi sharci darro ah oo adduunka ka jira. Xukuumadda Soomaaliya ayaa lafaheeda la qeybsatay mas’uuliyiinta Iiraan iyo hay’adda ilaalinaysa kalluumeysiga, Guddiga Badweynta Hindiya ee loo yaqaan (IOTC).
Caddeymo ay ururiyeen NGO-yada ayaa muujinaya in maraakiibta Iiraan ay lahaan karaan 192 markab, lix jeer cabir ahaan 31-markab oo Shiinees ah oo ruqsad u siinaya inay kalluun si joogto ah uga joogaan biyaha Soomaaliya. Waxay yiraahdeen maraakiibta Iiraan waxay ka shaqeynayeen gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale Yemen, laga bilaabo Janaayo 2019 illaa Abriil 2020. Qaar baa laga helay kalluumeysi meel u dhow xeebta, gudaha aag u gooni ah kalluumeysatada farshaxanimada leh ee qaranka. C / llaahi Bidhan Warsame, wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka bada ee Soomaaliya, wuxuu ku baaqay iskaashi laga helo Iran.
Wuxuu yiri: Kalluumeysiga sharci darrada ah uma dulqaadan doono Soomaaliya. Xaaladda la xiriirta joogitaanka maraakiibta Iiraan ee ku sugan biyaha Soomaaliya, ayaa weli ah walaac muddo dheer ka taagnaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyo sharci darro, kalluumeysi sharci darro ah oo aan la soo sheegin oo aan la soo koobi karin ee biyaha Soomaaliya waxay khatar weyn ku tahay amniga cunnada, horumarka dhaqaalaha, madax-bannaanida iyo bay’ada badda. ee Soomaaliya. ” Soomaaliya 15 milyan ee qof ayaa xilligan la kulma hanjabaado badan oo dhanka amniga cuntada ah, oo ay ka mid yihiin duufaano lamadegaan ah oo socda iyo abaaro hore oo sababay daadad iyo sidoo kale Covid-19. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay dad lagu qiyaasay 2.7 milyan oo qof in ay wajahayaan heerar qalalaase oo xagga cunno yaraanta ah, iyada oo aan gargaarka bani’aadamnimada la helin, halka 2.9 milyan oo kale ay culeys ku hayaan cuntada.
Soomaaliya waxay leedahay 2,000 mayl xeebta, waana tan ugu weyn Afrika, laakiin sanado dagaallo sokeeye iyo xasillooni darro ayaa ka dhigtay inaysan awood u lahayn inay si wax ku ool ah u ilaaliso biyaheeda. Waxaa ku dhacay kalluumaysiga IUU, kaas oo ay sheegtay inay dhiirrigeliso burcad-badeednimada. Tan iyo 2018, qaranku, oo qayb ka ah FishiAfrica, oo ah guddi hawleed ka socda bariga Afrika, IOTC iyo NGO-yada iska kaashanaya la-dagaallanka kalluumaysiga IUU, ayaa $ 1m sanadkii ka qaata ruqsadaha kalluumaysiga ee laga iibiyo Shiinaha. Soddon iyo kow maraakiibta Shiinaha ayaa shati u leh inay ka kalluumaystaan ​​meel ka baxsan 25 mayl. Duncan Copeland, oo ah madaxa falanqaynta TMT, ayaa sheegay inuu ka warqabo maraakiibta sharci darrada ah ee gobolka ku sugan laakiin falanqayntiisa, waxaa suurta galiyay isticmaalka sii kordhaya ee iskudhafka shilalka ee maraakiibta Iiraan, waxay muujineysaa “cabirku waa mid qatar ah”. Waxaan aragnaa maraakiib tiro badan oo sidan oo kale ah, ayuu yiri Copeland. Waa wax ka sarreeya wixii qorshe maarayn ah uu ula tacaali karo. Waa habka dadaalka badan ee kalluumeysiga gobolka. Waxay kuxiran doontaa keydka. In kasta oo warbixinno laga helayo in kalluumeysiga sharci-darrada ah ee baahsan ee ay Iiraan iyo maraakiibta kaleba la ogaa in muddo ah la ogaa, haddana cabirkaas lama yaqaan illaa iyo hadda. Warshadaha gobolka ayaa bilaabay inay isticmaalaan Nidaamka Aqoonsiga Automatic (AIS) doomahooda iyo qalabka, taas oo sidoo kale u oggolaaneysa in lagu raaco satalaytka. Copeland wuxuu sheegay in maraakiibta, oo badidoodu calan u tahey Iran, ay si cad ugu shaqeynayeen sharci darro. Waxay sidoo kale heleen tiro yar oo maraakiib ah oo lagu calaameeyay Pakistan, India iyo Sri Lanka .
Previous articleXasan Muudey ”Puntland yeeysan laxumaan federaalkii ay aadka ula dhacsaneyd…”
Next articleKeybulada ka howla Maamulka Somaliland oo laguy amray in ay ka saaraan TV yada Star iyo universal si aan looga daawan Gobolada waqooyi ee Somalia
VIDEO Qaar ka mid ah isimada puntland oo hadimo sharafeyd dagmada deyniile loogu sameeyey
Kusimaha Gudoomiyaha Goboka Banadir Mr Mahadale oo wareegto ku magcaabay gudiyo kala duwan
Somalisan News - July 27, 2019
‘The Police Shoot At Journalists All The Time’: Press Freedom Shrinks In Somaliass